🥇 ukubalwa kwezinyoni
Ngabe ufuna ukuthenga uhlelo?
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 24
Ngabe ufuna ukuba nguzakwethu webhizinisi lakho edolobheni noma ezweni lakho?
Ukunakwa! Ungaba ngabamele ezweni lakho noma edolobheni!
Futhi sikulungele ukumela izimpahla zakho noma izinsizakalo ezweni lethu.
Ividiyo yokubalwa kwezinyoni
Oda ukubalwa kwezinyoni
Yonke ipulazi lezinyoni zesimanje kumele, ngaphandle kokwehluleka, ligcine irekhodi lezinyoni zalo, okuqala, okuthinta ukubalwa kwezimali, ngoba ngale ndlela kuzoba lula kakhulu ukuthola iziphetho ngenzuzo yenkampani iyonke. I-accounting yezinyoni ingahle ihlelwe ngezindlela eziningi, izinhlangano ezahlukahlukene zisasebenzisa amaphephabhuku e-paper accounting njengesisekelo sezibalo zokubalwa kwezimali, lapho abasebenzi bezinyoni 'basepulazini babhalisa ngesandla lonke ulwazi oludingekayo futhi bagcine amatafula akhethekile. Kodwa-ke, enye indlela yokuhlela ukulawula ingakhethwa, lapho emsebenzini womuntu bazomiselela isoftware ye-automation. Ikuvumela ukuthi wenze yonke imisebenzi efanayo yansuku zonke izikhathi eziningi ngokushesha nangcono.
Okokuqala, ukubalwa kwezinyoni kusho ukulawulwa kwemisebenzi eminingi yokukhiqiza, okumele iqoshwe ngesikhathi esifanele, futhi imininingwane etholakele kufanele icutshungulwe ngokushesha. Umuntu ohlala ethembele ezimeni zangaphandle nakwezinye izinto ezingaphandle, njengokulayishwa komsebenzi, akakwazi ukuhlinzeka ngekhwalithi ye-accounting eqinisekisiwe nezinzile. Ngenxa yokuncika kwayo, imininingwane efakwe kumaspredishithi okubalwa kwezinyoni ingaphanjaniswa, ifakwe kungakabi isikhathi, noma isisebenzi singaphazamiseka ngokuphelele futhi singafaki imininingwane edingekayo. Ngokusebenzisa uhlelo lwekhompyutha, unciphisa zonke lezi zingozi, ngoba ubuhlakani bokufakelwa besoftware busebenza ngaphandle kokuphazamiseka namaphutha, kungakhathalekile ukuthi yiziphi izinto ezibalwe ngenhla.
Ngale ndlela yebhizinisi, uqinisekisiwe ukubalwa kwezinyoni okuhlanzekile futhi okusobala, ukugcinwa kwazo, ukondliwa nokukhiqizwa kwazo. Kuyaphawuleka futhi ukuthi ukusetshenziswa kohlelo lwekhompyutha lokuphathwa kwemisebenzi yezinyoni kusiza ukudlulisela ngokuphelele ukubalwa kwemali endizeni yedijithali, eyenzeka ngenxa yemishini yekhompyutha yezindawo zokusebenza, engenakugwemeka ngesikhathi sokuzenzekelayo. Ngaphezu kwamakhompyutha, abasebenzi bepulazi lezinyoni kufanele bakwazi ukusebenzisa okokusebenza okuhlukile okuvumelaniswe nesoftware ekukhiqizeni. Ngokwengxenye enkulu embonini, zisetshenziselwa ukulawula izinqolobane lapho izinyoni zondla khona nemikhiqizo yezinyoni igcinwa khona. Ukuqaliswa kokubalwa kwezimali ezidijithali kunezinzuzo zako, lapho kwenziwa ucwaningo oluningiliziwe lapho kucaca khona ukuthi leyo ndlela yokuphatha iyona kuphela efanele. Idatha yedijithali ingagcinwa ku-database yokufakwa kwesistimu isikhathi eside ngenkathi ihlala ifinyeleleka kalula kubasebenzi, ngakho-ke uma kwenzeka kunanoma isiphi isimo esinokuphikiswa, ungayilungisa kalula ngobufakazi obuningi bobufakazi. Ngaphezu kwalokho, ukugcina imininingwane kuhlelo lokusebenza oluzenzakalelayo lokubalwa kwezinyoni kuzivumela ukuthi ziqinisekise ukuphepha nokugcinwa kuyimfihlo, ngoba hhayi nje kuphela ukuthi isoftware yesimanje inesistimu yokuvikela enezigaba eziningi, kepha futhi ungalungiselela ukufinyelela kwazo kumsebenzisi ngamunye ngokwehlukana. Uma usuvele uthathe isinqumo sokudlulisela ibhizinisi lakho ekulawuleni okuzenzakalelayo, isinyathelo esilandelayo lapho uzoba ukukhethwa kwesoftware efanelekile, okukuningi kakhulu okwamanje.
Uhlobo oluhle kakhulu lwesicelo sekhompyutha sokwenza noma yiluphi uhlobo lomsebenzi lube ngumkhiqizo oyingqayizivele kusuka kubathuthukisi abaziwayo abaneminyaka eminingi yesipiliyoni, inkampani yokuthuthukisa i-USU Software. Ibizwa nge-USU Software futhi ibikhona emakethe yezobuchwepheshe iminyaka engaphezu kwengu-8. Uhlelo lokusebenza luhle kakhulu ekubaleni nasekulawuleni izinyoni kwezinye izici zemisebenzi yokukhiqiza epulazini lenyoni. Ngosizo lwayo, ungalawula kalula abasebenzi, ukubalwa nokubalwa kwamaholo, ukunyakaza kwezezimali, ukugcinwa, kanye nohlelo lokugcina lokudla, kanye nemikhiqizo eyahlukahlukene, kuthuthukiswa ukuqondiswa kweCRM, nokunye okuningi. Ngokwengeziwe, ukumiswa kweSoftware ye-USU yokubalwa kwezinyoni akuyona ukuphela kwento yayo, ngoba abakhiqizi bamelela ukwakheka kwezinhlelo ezahlukahlukene ezingaphezu kwamashumi amabili zazo, ezenzelwe ukuphathwa okuzenzakalelayo kwemikhakha eyahlukahlukene yebhizinisi. Isoftware yekhompyutha enelayisense kulula kakhulu ukuyisebenzisa nokuyifaka. Kungenziwa ngenkathi uhleli ehhovisi, ngaphandle kwesidingo sokuya noma yikuphi, ngoba ama-programmers ethu asebenza kude futhi angahlela isoftware ngisho kude, okudingayo nje ukuthi unikeze ukufinyelela kukhompyutha yakho futhi unikeze ukuxhumana nge-Intanethi. Lokhu kunikeza ochwepheshe be-USU Software inzuzo enkulu ngoba ngale ndlela bangabambisana nezinkampani ezahlukahlukene emhlabeni jikelele ngaphandle kwezithiyo. Idizayini efinyelelekayo yesikhombimsebenzisi sohlelo ikuvumela ukuthi uqale ukusebenza kuyo ngaphandle kokulungiselela noma ukuqeqeshwa, ngakho-ke isisebenzi esinezimfanelo ezithile singasebenzisa i-USU Software. Ngokumangazayo, ngisho nemenyu yalolu hlelo elenza imisebenzi eminingi inezingxenye ezintathu kuphela, njenge- 'Imibiko', 'Amamojuli Nezikhombo. Kusinye nesinye sazo, kwethulwe ezinye izigaba ezimbalwa ezisiza ukwenza imisebenzi yokubalwa kwemali ngokuningiliziwe. Yonke imisebenzi eqhubekayo edingekayo ukuze kuqaliswe ukubalwa kwezinyoni iqoshwe esigabeni samaModyuli, lapho kukhona ukulawula igama ngalinye noma isihloko ngendlela yokwenza amarekhodi akhethekile kagesi noma amatafula. Ngokwalo, lesi sigaba singethulwa njengamaspredishithi wokubala okusebenza okuningana okubalwa kwezinyoni, amapharamitha awo ahlelwe ngokwezidingo zomsebenzisi ngamunye. Bangafaka noma yiluphi ulwazi kuyo yonke imisebenzi eqhubekayo yokukhiqiza, balandele isimo sezindaba zamanje. Ukuze i-accounting igcinwe ngokuzenzakalela, ngaphambi kokuqala umsebenzi ku-USU Software, kuyadingeka ukunikela isikhathi sokugcwalisa isigaba se-'Referensi ', okuyisisekelo esakha isakhiwo segama lebhizinisi uqobo. Lapha ungangeza izifanekiso ezithuthukisiwe zemibhalo yakho yangaphakathi; uhlu lwabasebenzi, izinyoni, okuphakelayo, imithi; amashejuli wokushintshwa kwabasebenzi; amashejuli wokudla kwezinyoni nemisebenzi ehlukahlukene yezilwane, njll
Ngokulinganayo, okubalulekile ekufakweni kwesoftware yokubalwa kwezinyoni isigaba samaModyuli, esibhekele imisebenzi yokuhlaziya emisebenzini yokukhiqiza. Ngenxa yokusebenza kwayo, ungakwazi ngokushesha nangempumelelo, futhi okubaluleke kakhulu, uhlaziye ngokuningiliziwe noma isiphi isici onentshisekelo kuso, uhlanganise izibalo ngokususelwa ekuhlaziyweni bese uyikhombisa ukuze icaciseleke ngendlela oyifunayo, njengamaspredishithi, amashadi, amagrafu, imidwebo . Futhi kuleli bhulokhi, kuyenzeka ukuthi kukhiqizwe ngokuzenzakalela futhi kulungiselelwe izitatimende zezezimali nezokubalwa kwezimali, okudlala indima ebalulekile ekubalweni kwemali. Ayikwazi ukuhlanganiswa yilo lodwa uhlelo, kodwa futhi izothunyelwa kuwe nge-imeyili ngesikhathi esifanele. Ngamathuluzi amaningi awusizo ku-arsenal yayo, i-USU Software kufanele ibe umsizi obalulekile kunoma yimuphi umphathi noma umnikazi.
Sengiphetha, ngithanda ukusho ukuthi isicelo sethu esizenzekelayo sokubalwa kwezinyoni asigcini nje ngokusebenza okubanzi nokulungiswa okulula kepha futhi nentengo yentando yeningi yokuqalisa; uhlelo lokuhlala lwabathuthukisi be-USU alusho ukuthi ukusetshenziswa kwemali yokubhalisile, ngakho-ke, ukusetshenziswa kwesoftware sonke isikhathi kumahhala ngokuphelele.
Ku-USU Software, umsebenzi wezinyoni nokugcinwa kwazo wenziwa ngokuqhubekayo, ngoba ungahlala ubheka imisebenzi ekhonjisiwe yosuku ku-database yayo. Lapho usebenza namatafula, ungenza ngezifiso amapharamitha awo ngendlela yakho, ngokushintsha inani lemigqa namaseli, usule noma uwashintshe, uhlele okuqukethwe kolwazi kumakholomu ngokunyuka noma ukwehla kwe-oda. Ngenxa yokwakhiwa okuzenzakalelayo kwezitatimende zezezimali, uqinisekisiwe ukuthi uzilungiselela futhi uzithumele ngesikhathi futhi ngaphandle kwamaphutha. Kumaspredishithi e-accounting, lapho uwagcwalisa, kungenzeka usebenzise noma yiluphi ulimi olutholakalela ukuqonda kwakho, lapho uthenga inguqulo yomhlaba wonke yesoftware yekhompyutha. Ukuze kube lula ukuphathwa kwe-accounting kokuqukethwe kwabo kuhlelo lokusebenza, ungakha noma iyiphi inombolo yezinqolobane.
Ukuphathwa kwebhizinisi nge-elekthronikhi ku-USU Software kukuvumela ukuthi uthole imininingwane enembile kakhulu, ethembekile, futhi evuselelwe yokubalwa kwezimali ngaso sonke isikhathi. Kuzoba lula kakhulu ukulawula izinyathelo zezilwane zezinyoni uma usebenzisa i-task glider eyakhelwe ohlelweni. Izindleko zemikhiqizo ekhiqizwa epulazini lezinyoni zibalwa ngohlelo ngokuzenzekelayo, ngokuya ngemininingwane yezindleko etholakalayo, elula kakhulu ukubalwa kwezimali. Kuma-spreadsheet, uhlelo alukwazi ukuqukatha imininingwane yezinyoni kuphela, inzalo yabo kanye nemikhiqizo, kepha futhi nesisekelo samakhasimende enkampani. Ngokwakha i-database yamakhasimende, isoftware ikhiqiza amakhadi abo ngamunye wabo, lapho ifaka khona lonke ulwazi olutholakala kulo muntu. Ungathuthukisa izifanekiso ozozisebenzisa ukwakha ukugeleza kwedokhumenti enhlanganweni ngokwakho noma uthathe isampula elibekwe umbuso.
Imingcele yamatafula ‘Kumamojula’ ingashintshwa kuphela yilabo basebenzisi abathole amandla afanayo nokufinyelela kumphathi. Ukuphathwa kwepulazi lezinyoni kungalawula ukutholakala kwamafayela ayimfihlo e-database kagesi, kuya ngegunya lesisebenzi esithile. Ukusebenza ku-USU Software kulula kakhulu ngemisebenzi ehlangene yamayunithi amaningana axhunywe yinethiwekhi yendawo noma i-Intanethi. Ngenxa yesici sokwenza isipele idatha ye-accounting, kufaka phakathi amaspredishithi okuphatha izinyoni, uhlelo lwethu likuvumela ukuthi ugcine imininingwane iphephile isikhathi eside.
Uhlobo lwesikhalazo *Thenga uhleloCela isethuloUkubuza umbuzoSiza nge-demo-version
Umlayezo awuthunyelwanga. Sicela uzame futhi emuva kwesikhathi.
Umlayezo uthunyelwe ngempumelelo! Siyabonga ngesicelo sakho! Esikhathini esizayo esiseduze, uzoqiniseka ukuthola impendulo.
Uhlelo lwemininingwane yamakhasimende
Uhlelo lwe-accounting accounting
Uhlelo lokuhweba ngekhomishini
Inqubo yokubalwa kwezimali
Isoftware yokumaketha kwenethiwekhi
Uhlelo lokulawulwa kweklabhu
Uhlelo lokuthengisa amathikithi
Isoftware ye-ejensi yokuhumusha
Uhlelo lwenhlangano yokukhangisa
Uhlelo lwesikhungo sosizo
Uhlelo lwenkampani yonogada ezimele
Ukubalwa kwezimali kanye nokuhlaziywa kokukhiqizwa kwemfuyo
Ukubalwa kwezindleko nokuvunwa kwemikhiqizo yemfuyo
Ukubalwa kokukhiqizwa kwezitshalo nemfuyo
Ukubalwa kwemikhiqizo yemfuyo ephelile
ukubalwa kwemali yokugcina izilwane
Ukubalwa kwezindleko zokukhiqiza zemikhiqizo yokulima yobisi
Ukubalwa kwesivuno semikhiqizo yemfuyo
ukubalwa kwezimali ekufuyeni ubisi
ukubalwa kwemali ekuzalaneni kwezingulube
Ukubalwa kwemali ekuzalaneni kwezimvu
i-accounting log yokuvunwa kobisi
ukubalwa kwezilwane ngokukhuluphala
Ukubalwa kwezilwane ngokukhula nokukhuluphala
ukubalwa kwezindleko zemfuyo
ukubalwa kwezindleko ekukhiqizweni kwemfuyo
ukubalwa kwemikhiqizo yenkukhu
ukubalwa kokukhiqizwa kwemikhiqizo yemfuyo
ukubalwa kwemali kwemikhiqizo yokulima yobisi
ukubalwa kwemikhiqizo yemfuyo
ukubalwa kwezimali epulazini lezinkukhu
ukukhiqizwa kwe-accounting ekufuyweni kwezilwane
uhlelo lokuphendula ngezinkukhu
Ukuhlaziywa kwemikhiqizo ebiza imali yemfuyo
Ukuhlaziywa kokukhiqizwa nezindleko zemikhiqizo yemfuyo
ukuhlaziywa kwemikhiqizo yemfuyo
Ukuhlaziywa kwezindleko zobisi
Ukuhlaziywa kwentengo yezindleko zokufuya izilwane
ukubalwa kwezimali kokuhlaziywa kwemfuyo
Ukuhlaziywa kwezibalo zokukhiqizwa kwemfuyo
Ukubalwa kwezilwane epulazini
uhlelo lokusebenza lwepulazi
ukuzenzekelayo kokufuya izilwane
umshini wokuzenzekelayo wepulazi
uhlelo lokuthuthukisa amapulazi
i-logbook ye-accounting accounting
ukubalwa kwamapulazi abalimi
ukulawula umkhiqizo kwemfuyo
ishidi lokurekhoda lokubalwa kwemali kokuphakelwa kokusetshenziswa
ishidi lokuqopha lama-feeds accounting
ishidi lokurekhoda lokulawulwa kwesabelo
Uhlelo lokuthuthukisa izinkomo zezinkomo
Izinhlelo zezinkomo zezinkomo
Ukubalwa kwezindleko zobisi
Isikhungo sezinhlelo zolwazi ekufuyweni kwezilwane
Lawula ukugcina izilwane
Ukulawulwa kwepulazi lezinkukhu
Ukulawulwa kwenyama yenkukhu
Ukubalwa kwezindleko kwemikhiqizo yemfuyo
Izindleko zibalwa ngokulima ubisi
Ukubalwa kwezindleko ekufuyeni izinkukhu
Uhlelo lokuthuthukisa ukulima ngobisi
Ukuphathwa kwepulazi lobisi
Landa uhlelo lokusebenza lwepulazi
Landa uhlelo lwamahhala lwepulazi
Landa uhlelo lwepulazi
Thwebula Uhlelo of onogwaja ezimali
Incwadi ye-elekthronikhi yokubalwa kwezilwane nezinyoni
Isoftware yokubalwa kwepulazi
Okuphakelayo ukusetshenziswa accounting
Okuphakelayo ukusetshenziswa log
Ukulawulwa kwekhwalithi yokuphakelayo
Ukugcwalisa isitatimende sokulawulwa kokudla
Isoftware yokuphatha umhlambi
Izinhlelo zokuphatha umhlambi
Uhlelo lolwazi ekufuyweni kwezilwane
Uhlelo lokuthuthukiswa kwemfuyo
Imfuyo ipulazi ezishintshayo
Isibalo somhlambi omkhulu
Ukuphathwa kwepulazi labantu abampofu
Ukuphathwa kwepulazi lezinkukhu
Ukusebenza kwemishini nokuzenzekelayo kwemfuyo
Ukubalwa kokukhiqizwa kobisi
Uhlelo lokubalwa kwe-inthanethi lwenyoni enkulu
Ukubhaliswa kozalo ekufuyweni kwezilwane
Ukulawulwa kwekhwalithi yenkukhu
Ukubalwa okuyisisekelo kwemikhiqizo yemfuyo
Ukulawulwa kokukhiqiza ubisi
Ukukhiqizwa kwemikhiqizo yemfuyo
Uhlelo lokufuya izilwane
Uhlelo lomlimi oqalayo
Uhlelo lwepulazi labalimi
Uhlelo lwabazalisi bemfuyo
Uhlelo lokubalwa kwezingulube
Uhlelo lwepulazi lezinkukhu
Uhlelo lokufuya izimvu
Ukulawulwa kwekhwalithi yenyama yenkukhu
Ukubhalisela ukuzalanisa izinkukhu
Ukuqhuba ipulazi labantu abampofu
Uhlelo olucekeceke oluncane
Amaspredishithi ekufuyweni kwezilwane
Izinhlelo zokufuya izilwane
Izinhlelo zokugcina izilwane
Uhlelo lwepulazi labantu abampofu
Uhlelo lwezinkukhu epulazini
Uhlelo lokubalwa kwezimvu
Ukubalwa kwabantu kwe-Waterfowl
Uhlelo lomsebenzi wokufuya izilwane
Ukubalwa kwemali kweZootechnical ekuphathweni kwezilwane